NVP သည် 4K UHD နှင့် HDR များအတွက် OB ရေယာဉ်စုကို Grass Valley မှ Live Production Solutions ဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NVP မြက်ချိုင့်ထဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်အတူ 4K UHD နှင့် HDR များအတွက် OB ရေယာဉ်စုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Montreal - 8: 00 EST မတ်လ 18, 2019 - အီတလီထုတ်လုပ်မှုအထူးကု NVP ကနေတိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မရွေးထားပါတယ် မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden ၎င်း၏အပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့် (OB) 4K UHD နှင့် HDR content များအတွက်ကြီးထွားလာကြည့်ရှုသူဝယ်လိုအားကိုထောကျပံ့ဖို့စင်းကိုတစ်ခုအဆင့်မြှင့်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်။ NVP ရဲ့ OB4 နှင့်အသစ်ဖြန့်ချိ OB6 မော်တော်ယာဉ်များတွင်တပ်ဆင်, ဒီကြံ့ခိုင်တိုးမြှင့်ဥရောပတိုက်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် NVP ​​ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုခိုင်မာစေ။
နှစ်ဦးစလုံးကုန်တင်ကား, မြက်ချိုင့်ဖွင့် 4K UHD နှင့် HDR- တပ်ဆင်ထားကြသည် Kahuna 9600 ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်,Kaleido မြင်ကွင်းစုံ, Densité modular အခြေခံအဆောက်အအုံ, Sirius 840 Router က နှင့် KudosPro converters ။ ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ကိုသူတို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ပုံအရည်အသွေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခြွင်းချက်ခံနိုင်ရည်ဘို့ရွေးကောက်ခံခဲ့ရသည်။ NVP အားလုံးကိုဝေဖန်အချက်များ - အတူတကွအစွမ်းထက် 4K UHD နှင့် Kahuna 9600 နှင့် Sirius 840 router ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှု၏ HDR စွမ်းဆောင်နိုင်မှု, ရှိသမျှ functionality နဲ့ format ကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုလုံးဝအရွယ်မှာလမ်းကြောင်းကိုကယ်နှုတ်တော်မူ။
"ကြည့်ရှုသူများသည်ရှည်လျားကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်ဘဏ်ဍာများအတွက်အခြေခံစံနှုန်း setting, နည်းပညာအတွက်လာမယ့်အောင်မြင်မှုများလိုက်ရှာနေတာဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, သူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပုံရိပ်တွေ၏အရည်အသွေးအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအကြောင်းအရာစစ်ကြောစီရင်ကြပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်သူတို့ 4K UHD နှင့် HDR ၏မြင့်တက်လာများကဲ့သို့ပြောင်းလဲတောင်းဆိုချက်တွေ, တွေ့ဆုံရန်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်သူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုချင်သောအကြောင်းအရာများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသူတို့ကို enable လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်သိ "Natalino Pintabona, NVP မှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားသည်။ နှင့်အောင်မြင်မှုတွေ - - "နှစ်ပေါင်းများစွာမြက်ချိုင့်နှင့်အတူပူးပေါင်းပွီး, ငါတို့အတိတ်အတွေ့အကြုံများကနေသိတယ်သူတို့ကဒီအရေးကြီးသောစီမံကိန်းကိုများအတွက်ယုတ္တိရွေးချယ်မှုကြ၏။ ယခုကြှနျုပျတို့တိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ပြုလုပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအားကောင်းတဲ့အစုရှိသည်။ အဆိုပါမြက်ချိုင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်များ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအသုံးခနြိုငျစမတ်အလုပ်လုပ်ကူညီပေးနေ, သာ. ကြီးမြတ်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုမောင်း။ "
အဆိုပါစီမံကိန်းကို၏စနစ်ပေါင်းစည်းမှု, ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည် ဗီဒီယိုကို Progettiတစ်ဦးဦးဆောင်အီတလီ System Integration နှင့်ရေရှည်မြက်ချိုင့်ရုပ်သံလိုင်းဖက်။
"ဒါဟာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 4K UHD / HDR ကိုဘဏ်ဍာကိုထောကျပံ့နိုငျကွောငျးကိုအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်အတူအနာဂတ်-သက်သေပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဤပထမဦးဆုံးအတန်းအစားကုန်တင်ကားအရေးပါခဲ့ပါတယ်" Carlo Struzzi, ဗီဒီယို Progetti မှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆက်ပြောသည်။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု Switcher, routers နှင့်မြင်ကွင်းစုံများကဲ့သို့အရေးပါသောဒြပ်စင် sourcing မှရောက်လာသောအခါ "ငါတို့သည်နောက်နောက်ထပ်မြက်ချိုင့်ဖို့ထက်ကိုကြည့်ဖို့သိတယ်။ ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက် NVP ​​ရဲ့ OB ဗင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုအတွက်မော်ဒယ်လုပ်ကူညီနေတာပါ။ "
"ဒါဟာထုတ်လွှင့်ကြည့်ရှု၏ကြီးထွားလာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတို့ကို enable သောညာဘက်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာများကိုတပ်ဆင်ထားသည်ဟုအလွန်အရေးကြီးသည်ရဲ့" တိဘဏ်များ, ရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ EMEA, မြက်ချိုင့်ကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ OB ရေတပ်အဘို့ကျောက်-အစိုင်အခဲနှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထားဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသူတို့ကိုကူညီပေးနေ NVP အတူလုပ်ကိုင်ခံရဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ "
ကအီတလီမှာနှင့်အခြားစျေးကွက်ဖြတ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့ဖို့ဆက်လက်အဖြစ် NVP,4အတွက်တတိယ 2020K UHD နှင့် HDR-enabled OB ဗန်ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
4K UHD ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မြက်ချိုင့် မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ် ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NVP အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-03-18
နောက်တစ်ခု: MediaKind NAB ပြရန် 2019 မှာယင်း၏ဠာအစုစု၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူတီဗီ၏ခေတ်သစ်ကြိုဆို